6.ဆန်စက်နှင့်ဆန်စက်စက်အတွက် OEM ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်.
Zhengzhou ဗစ်တာစက်ယန္တရားကြီးသည်, အသီးအသီးအမျိုးအစားများအတွက်အလတ်စားနှင့်သေးငယ်တဲ့စပါးကို peeler စက်, ပြောင်းဖူးအပါအဝင်,ဆန် ,ဂျုံ,ပဲမျိုးစုံ, ဥယျာဉ်တော်ပဲ, သာ, ပဲမျိုးစုံစသည်တို့ကိုအဆင့်မြင့်သီးနှံဂျုံမှုန့်ထုတ်ကုန်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်, bean အစားအစာ, ပရိုတိန်းထုတ်ယူခြင်းစသည်တို့. လူများ၏အစားအစာပြောင်းလဲမှုနှင့်အစားအစာအာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လူများ၏လိုက်စားမှုကျေနပ်မှုပြီးနောက်, ပေါင်းစပ်ထားသောအခွံချွတ်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ပြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်, ဆန်, ဂျုံ,sorgum နှင့်ဒါ ,ပြောင်းဖူးခွံစက်သည်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်, အခွံ, တ ဦး တည်း time.In ထို့အပြင်မှာအမျိုးမျိုးစပါးကို၏သန့်ရှင်းရေး, အချောထုတ်ကုန်များကိုကြမ်း bran အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ peeled kernel ။. ပြောင်းဖူး peeler စက်၏လှပသောအသွင်အပြင်၏အားသာချက်များကိုရှိပါတယ်, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ, အဆင်ပြေတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း, လွယ်ကူသော debugging နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်သေးငယ်သည့်ဆုံးရှုံးမှု။ grian peeler စက်တွင်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်စက်ကိရိယာရှိသည်,သိသိသာသာအလုပ်သမားပြင်းထန်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်,နှင့်ဤ feature.we ၏ ergonomics တိုးတက်အောင်နှင့်ဖောက်သည်၏အထူးအခြေအနေသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အရသိရသည်အသင့်တော်ဆုံးပဲမျိုးစုံအခွံစက်ထုတ်လုပ်ရန်. ကောက်ပဲသီးနှံအခွံစက်ကိုကင်ညာသို့တင်ပို့သည်, မက္ကစီကို, အယ်လ်ဂျီးရီးယား, ဖိလစ်ပိုင်,နိုင်ဂျီးရီးယားစသည်တို့.
ဘောဇဉ် Peeler စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံ
ဤရွေ့ကားစပါးကို peeler စက်အလျားလိုက်သံ roller စပါးကိုအခွံစက်ဖြစ်ပါတယ်,စပါးအခွံစက်အဓိကအားဖြင့် feed ကိုဝင်ပေါက်ပါဝင်ပါသည် ,roller အထက်အဖုံး, အောက်ပိုင်းထိုင်ခုံ, ဘယ်ဖက်နှင့်ညာဘက်မြို့ရိုးကိုပန်းကန်, အပေါက်အပေါက်, လွှဲဓား, အောက်ခြေဆန်ခါ,ကိရိယာနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေး. Pluggable စကိတ်ဘုတ်အောက်ရှိကွက်လပ်တစ်ခုနှင့်အတူပြောင်းဖူးအခွံစက်,ဝင်လာသောပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်. ၎င်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံများတင်သည့်နေရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်.
ဘယ်အချိန်မှာစပါးအခွံစက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ, လှည့်ရိုးကိုပါဝါကမောင်းနှင်သည်. spiral groove နှင့်အတူစည်ဟာအစွန်အဖျားလမ်းကြောင်းသို့လှည့်လာသည်. ကုန်ကြမ်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံစက်၏ဘယ်ဘက်အဆုံးကိုဟက်ပါ၏ပွင့်လင်းပြီးပိတ်ထားသောရိနာစွဲဖုံးပြားမှတဆင့်ဝင်သည်. စည်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလိမ် groove လည်းမရှိသကဲ့သို့, အဆိုပါကုန်ကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ညာဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေသည်. စည်၏မြန်နှုန်းမြင့်လည်ပတ်မှုအောက်မှာ, စတူဒီယိုပြည်တွင်းရေးဖိအားထုတ်ပေးပါတယ်, အဆက်အသွယ်နှင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်စပါးနှင့်ဓါးအတင်းအကျပ်နှင့် shell ကိုဖြတ်သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အဆိုပါဗိုင်းလိပ်တံစက်သီးလှည့်ဖို့လေတိုက်စည်မောင်း, ထို့အပြင်ပြုပြင်ထားသောစပါးများသည်စွန့်ပစ်ဆိပ်ကမ်းမှဖြတ်စီးသွားပြီးသန့်ရှင်းရေးခန်းရှိဆန်ချဉ်စက်. ပစ္စည်းအချိုးအစားအရကွဲပြားခြားနားသည်, လေ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်စည်စုတ်ယူခြင်းအတွက်ပိုမိုပေါ့ပါးဖွဲ, filter ကိုမျက်နှာပြင်တလျှောက် (ထောင့်) ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်း, စပါးကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးအောင်နှင့်နောက်ဆုံးပုံးသို့.
စပါးကိုအခွံစက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
port size ကိုအစာကျွေးခြင်း
output port ကိုအရွယ်အစား
ဘောဇဉ် peeler စက်၏ဗီဒီယို
Grain peeler စက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ